I-Annexe ekwilizwe elihle - I-Airbnb
I-Annexe ekwilizwe elihle
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguMelina
Isihlomelo esihle segumbi lokulala elinye kwi-shropshire yasemaphandleni - ilungele iholide okanye ikhefu lempela-veki.
I-Annexe iquka indawo yokuhlala evulekileyo nenento yonke oyifunayo ukuze uhlale kamnandi.
Inendawo enkulu yokuphumla eneendawo zokuhlala abantu abayi-3 nendawo yokufaka izinto ezintofontofo ekugcina ushushu. Ngokuqinisekileyo kukho nokufudumeza umbane, ngoko ukuba isixhobo sokutshisa iinkuni asiyiyo into yakho uza kuqhubeka ushushu.
Indawo yokutyela inetafile yeplanga kunye neendawo zokuhlala abantu abayi-4.
Ikhitshi elincinci elincinci linayo yonke into oyidingayo ukuze upheke ukutya okulula (mna nomyeni wam siyakuthanda ukupheka ngoko zonke izixhobo ziyasebenziseka - ikhaya lokwenene usekhaya).
Kukho ifriji, i-microwave kunye nendawo enkulu yokulungiselela ukutya. Uza kufumana ityuwa, ipepa kunye neoli yomnquma oza kuyisebenzisa ngexesha lokuhlala kwakho.
Sinikezela ngothando yonke into oyidingayo kwisidlo sakusasa kuquka ubisi olutsha, ukutya okuthandwayo, isonka, ibhotolo, ijam eyenziwe ekhaya kunye ne-marmalade - kunye neti kunye nekofu (kuquka ikofu esandul 'ukuvunwa kunye ne-cafetiere).
Igumbi lokulala linebhedi elala abantu ababini enomatrasi omfumamfuma, iwardrobe kunye nebhedi yeedrowa.
Xa abantu abayi-3 behlala sinebhedi encinci esilungele wena kwigumbi lokuphumla okanye kwigumbi lokulala.
Igumbi lokuhlambela lineshawa yombane, ishampu ne-conditioner ne-shower gel.
Amashiti okuhlamba umqhaphu kanokutsho, iitawuli zezandla kunye neefayidukhwe nazo ziqukiwe.
Ngaphandle yindawo yeveranda enetafile nezitulo onokuzisebenzisa wedwa.
4.94 · Izimvo eziyi-208
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi208
Sisezilalini ezintle ezinohambo oluhle oluya emnyango kodwa sikwiimayile eziyi-1.7 ukusuka eShifnal kunye neevenkile, iibhari neevenkile zokutyela kunye neelinki zezithuthi zikawonke-wonke kunye neemayile eziyi-3.4 ukusuka kwi-Minois.
Sikulungele ngokupheleleyo ukutyelela:
UDavid Austin Roses (ikumgama weemayile eziyi-4.7)
I-RAF Cosford (ikumgama weemayile eziyi-4,6)
I-Telford International Centre (iimayile eziyi-5.7 - imizuzu eyi-11)
I-Lilleshall Hall National Sports Centre, eNewport (iimayile eziyi-6.9 - imizuzu eyi-18)
I-ayinibridge (iimayile eziyi-7.6 - imizuzu eyi-17)
I-Blists Hill Victorian Town (iimayile eziyi-6.2 - imizuzu eyi-13)
IBridgnorth (iimayile eziyi-11.1)
I-Shrewsbury (iimayile eziyi-19.7 - yimizuzu eyi-30 xa uqhuba)
Zininzi iindawo ezintle onokuhamba kuzo emnyango, ibe sineenkcukacha zezi zinto (kuquka iifoto) ukuba unqwenela ukubuka indawo yasekuhlaleni uhamba ngeenyawo.
Kukho indawo yokupaka esimahla yeemoto eziyi-2 kwindawo yethu yokungena imoto.
Umbuki zindwendwe ngu- Melina
Siza kuyihlonipha into yakho eyimfihlo kodwa sikhona ukuze siphendule nayiphi na imibuzo size sikuncede ngayo nantoni na osenokuyidinga.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Shifnal